किन आउँछ यो दशैं :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
किन आउँछ यो दशैं
कसैको दशा बनेर।
अनि जान्छ यो दशैं
गरिबलाई पीडा दिएर।
छोडी जान्छ यो दशैं
अन्नको भकारी रिट्टो पारेर।
कसले पो सुन्छर!
शत्रु जति सबै
नाश होस् भनेर।
पशु पो नाश भए
रगत र पसिनाले
साटेको त्यो चामल
ऋणले चलेको यो दशैं
ऋण तिर्न नसके
कतिलाई दशा बनेर!
• मानव बस्तीहरूमा (कविता)